भारतको को''रोना खो''प यति सस्तो, भारतले दियो नेपाललाई यस्तो जानकारी - Onlines Time
भारतको को”रोना खो”प यति सस्तो, भारतले दियो नेपाललाई यस्तो जानकारी
December 13, 2020 December 13, 2020 by onlinestime
भारतको को’रोना खो’प यति सस्तो, भारतले दियो नेपाललाई यस्तो जानकारी
अध्यक्ष दुई जना सँगै बस्न नसक्ने स्थिति बनेपछि स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले शनिबार अध्यक्ष दाहाललाई भेटे । आइतबार बिहान अर्का नेता सुवास नेम्वाङसँग सहमतिको उपाय खोज्नेबारे छलफल हुने भएको छ । शनिबार रातिसम्म सहमतिको ठोस आकार आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले गत बैठकमा आफू आउन नसक्नुको कारण उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र आइलागेको संकट टार्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीसमक्ष आइपुगेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरुको आडभरोसा मागेका थिए । तर नेकपाभित्र गुटबन्दीको पारो यति धेरै माथि चढिसकेको छ कि सहमति र मिलेर अघि बढ्ने ठोस योजना स्थायी कमिटीका सदस्यहरुसँग पनि छैन । उनीहरु पनि गुटबन्दीकै मानसिकतामा छन् । आइतबारको स्थायी कमिटी बैठक छिर्नुपूर्व नेताहरुको मनस्थिति कस्तो छ त ? कान्तिपुरले गरेको प्रश्नमा केही स्थायी कमिटी सदस्यहरुको जवाफ यस्तो थियो :
‘ओलीजीले बैठकमा आएर कुरा राख्नुपर्छ’
कुराकानी गरेर केही न केही मिलाउनुहोस् भनेर हामीले एक साता समय दिएका हौं । मिलाउने मुडमा कोही पनि देखिँदैनन् । त्यसमा अलि धेरै पहल प्रधानमन्त्री केपी कमरेडले गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो स्थिति देखिँदैन । यो एकै दिनमा टुंगिने विवाद पनि होइन । छलफलमा सबैले बोल्नुपर्‍यो । छलफल गरेर कि कुनै न कुनै हिसाबको एउटा बुझाइ हुनुपर्‍यो, कि कमिटीले निर्णय गर्छ । हामीले बितेका ६/७ महिनादेखि नै विधि–पद्धति मानेर जाने, पार्टी कमिटीको निर्णयलाई मान्ने, सुशासन कायम गर्ने भनेर कुरा उठाउँदै आएका थियौं । छलफल नगर्दा एकलकाँटे निर्णय हुन्छन् । एकपछि अर्को विवाद आइरहेको छ । त्यसले सिंगो पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ ।
अर्को चुनावसम्म यही स्थिति हुँदा जनताले भोट के देलान् र ? हामीसित बाँकी भएको दुई वर्षमा करेक्सन गरेर चल्न सकियो भने जनतालाई भन्ने ठाउँ रहला । यही तालले चलेर त कठिन छ । कि करेक्सन गरेर अघि जानुपर्छ । आफूले लिन नसक्ने जिम्मेवारीको भारी सबै बोक्ने, काम केही पनि नगर्ने स्थिति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ, कि यही स्थितिमा कमिटीले निर्णय गर्छ । कमिटीले निर्णय गर्दैमा पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने पनि होइन । हुन त एकाथरी साथीहरूले पहिलेदेखि नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा गुटगत भेला गर्नुभएकै थियो । अघिल्लो स्थायी कमिटीमा सडकबाटै उठाएर जिन्दावाद मुर्दावाद भन्न लगाइयो । एकाथरीले गुटबन्दी गरेको गर्‍यै गर्ने हो भने प्रतिगुटबन्दी हुन्छ भनिएको थियो । माथि अन्डरस्ट्यान्डिङ बिग्रेको ठाउँमा भेला पनि भइरहेका छन् । निर्णय गर्ने कुरामा छलफल गरेर साझा बुझाइबाट जानुपर्छ । साझा सहमति बन्न सकेन भने दुनियाँभरको लोकतान्त्रिक परिपाटी अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्ने हो । ओलीजीले बैठकमा आएर कुरा राख्नुपर्छ । कार्यदल बनाउने, के गर्ने, मान्छे झुक्याउने काम गर्नुहुँदैन ।
‘भदौ २६ बाट अन्तै गए दुर्भाग्य’
२१ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले दुइटै प्रस्तावलाई एजेन्डा नबनाएर पार्टीको आन्तरिक समस्या सम्बन्धमा भन्ने एजेन्डा राखेको छ । त्यो एजेन्डा रहनु भनेको सहमतिको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य हो भन्ने मैले बुझेको छु । असार १० मा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक अनेक उतारचढाव हुँदै भदौ २६ मा पुग्यो । भदौ २६ को सहमतिको बाटोमा हिँड्नुको विकल्प छैन, त्यो नै पार्टी, राष्ट्र, जनता र नेताका निम्ति समाधानको बाटो हो । भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले समाधानको आधार दिएको छ । भिन्न तरिकाले जाने प्रयत्न भयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । २१ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा पेस भएका प्रस्ताव होइनन्, दुवै अध्यक्षका सवालजवाफ हुन् । ती सवालजवाफलाई अध्ययनका लागि बाँडिएकै छ । त्यसले पार्टीको आन्तरिक समस्या हल गर्दैन । त्यसलाई हल गर्नका लागि सहमतिको आधार खोज्नुस् भन्ने मेरो अनुरोध पनि हो । पार्टीमा अल्पमत, बहुमतको प्रावधान छैन ।
Prevदु:खद ख’बर मलेसियामा Top glove कम्पनीमा कार्यरत याम नारायण चौधरीको मृ’ त्यु
Nextइन्द्रेणी बिवाद बारे कृष्ण कडेलले दिए हासी हासी जवाफ , इलामबाट आए मिडियामा krishna kandel indreni